အသင်းအတွက် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အများကြီးရရှိစေခဲ့တဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့များ
23 Jul 2018 . 1:53 PM
ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းအတွက် ကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူတာဟာ အလောင်းအစားဆန်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီကစားသမားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ နာမည်ကျော်ကြားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး သူ့အတွက် ပေးချေရတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကလည်း အနည်းနဲ့အများကွာဟချက်ရှိလို့ပါပဲ။ တချို့အသင်းတွေကတော့ လူငယ်ကစားသမားတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ခေါ် ၊ အသင်းမှာ နေရာပေး၊ နာမည်ကြီးလာပြီဆိုမှ ကြိုက်ဈေးနဲ့ ရောင်းချလေ့ရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကြီး အာဆင်နယ်အသင်း လုပ်ခဲ့သလိုပေါ့။ တချို့ကလပ်တွေကလည်း နာမည်မကြီးပေမယ့် ခြေစွမ်းခြေစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူပြီး ထင်ရှားလာတော့မှ တခြားအသင်းတွေကို မြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အဲဗာတန်အသင်းက ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းရဲ့ ဘရာဇီးလ်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ရစ်ချာလီဆန် Richarlison (၂၁နှစ်)ကို ပေါင်သန်း(၅၀)နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအပြောင်းအရွှေ့သာ တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ၀က်ဖို့ဒ်အသင်း ငွေထုပ်ပိုက်မယ့် ကိန်းပါပဲ။ ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ နွေရာသီတုန်းက ရစ်ချာလီဆန်ကို ပေါင်(၁၁.၅)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၁)နှစ်အတွင်းမှာပဲ ပေါင်သန်း(၄၀)နီးပါးအထိ အမြတ်ရမယ့်အနေအထားပါ။
ဘောလုံးလောကမှာ ဈေးပေါပါနဲ့ဝယ်၊ ကြေးမြင့်မြင့်နဲ့ ပြန်ရောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အများကြီးရှိခဲ့သလို နောက်ထပ်လည်းရှိနေဦးမှာပဲ။ အဲဒီထဲကမှ အသင်းအတွက် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အများကြီးရရှိစေခဲ့တဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေကို ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာက အခုလို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . .
လာပေါ့တ် Laporte (ဘီလ်ဘာအို မှ မန်စီးတီး -အမြတ်ငွေ ပေါင် ၅၇.၂သန်း)
အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်မှာ ဘီလ်ဘာအိုလူငယ်အသင်းကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ လာပေ့ါတ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီလအတွင်းက မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပေါင် (၅၇.၂)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဘီလ်ဘာအိုအတွက် ငွေသုံးစွဲမှုမရှိဘဲ ပေါင်(၅၇.၂)သန်းကို သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကစားသမားတွေ ရောင်းချတာကနေ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း အများကြီးရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဘာအိုအသင်းရဲ့ Profitable Transfers ထဲမှာ လာပေါ့တ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။
အယ်လစ်ဆန် Alisson (ရိုးမား မှ လီဗာပူးလ် – အမြတ်ငွေ ပေါင်၅၇.၉သန်း)
၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ရိုးမားအသင်း ဘရာဇီးလ်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန် Alisson ကို အင်တာနေစီယွန်နယ်အသင်းကနေ ခေါ်ယူခဲ့တုန်းက ပေါင်(၇.၁)သန်းသာ ပေးခဲ့ရတယ်။ (၂)နှစ်အကြာမှာတော့ အယ်လစ်ဆန်ကို လီဗာပူးလ်အသင်းဆီ ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်တဲ့ ပေါင်(၆၅)သန်းနဲ့ ရောင်းချခဲ့တာကြောင့် ရိုးမားအသင်း ပေါင်(၅၇.၉)သန်းအထိ အမြတ်ငွေရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မာရက်ဇ် Mahrez (လက်စတာ မှ မန်စီးတီး – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၅၉.၆သန်း)
လက်စတာအတွက်တော့ မာရက်ဇ် Mahrez ကို ရောင်းချခဲ့တာက နှစ်သီးစားလို့တောင် ဆိုရမယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ကလပ် Le Havre အသင်းကနေ မာရက်ဇ်ကို ပေါင်(၄)သိန်းနဲ့ ခေါ်တယ်၊ မာရက်ဇ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့ပြီး ၂၀၁၅-၁၆ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း ပေါင်(၄)သိန်းတန် မာရက်ဇ်ကို မန်စီးတီးအသင်းဆီ ပေါင်သန်း(၆၀)နဲ့ရောင်းချခဲ့တာကြောင့် လက်စတာအသင်းဟာ အမြတ်ငွေ ပေါင်(၅၉.၆)သန်းအထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo (မန်ယူ မှ ရီးယဲလ် – အမြတ်ငွေ ပေါင်၆၇.၈သန်း)
စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းဆီ လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့ မန်ယူ အမြတ်ရခဲ့ပေမယ့် သေချာပြန်စဉ်းစားရင် ရှုံးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကွင်းတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကွင်းပြင်ပ အောင်မြင်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မန်ယူရခဲ့တဲ့ အမြတ်ငွေ ပေါင်(၆၇.၈)သန်းဆိုတာက ဘာမှ ပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏမဟုတ်တော့ဘူး။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအသင်းကနေ ပေါင်(၁၂.၂) သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အဲဒီတုန်းက ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖြစ်တဲ့ ပေါင်သန်း(၈၀)နဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့တာပါ။
ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale (စပါးမှ ရီးယဲလ် – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၇၅ သန်း)
ဆောက်သမ်တန်အသင်းမှာ စတင်တောက်ပလာတဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ်အတွက် စပါးအသင်း သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ငွေက ပေါင်(၁၀)သန်းပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပေါင်(၈၅)သန်းအထိရခဲ့တာကြောင့် အမြတ်အစွန်းအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။
အူစမန်ဒမ်ဘီလီ Ousmane Dembele (ဒေ့ါမွန် မှ ဘာစီလိုနာ – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၈၁သန်း)
လက်ရှိ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူ အူစမန်ဒမ်ဘီလီဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ရန်းစ်အသင်းကနေ ဒေ့ါမွန်အသင်းကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီအစမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေမာ Neymar ကို PSG အသင်းက ခေါ်ယူသွားတာကြောင့် သူ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် အူစမန်ဒမ်ဘီလီကို ပေါင်(၉၇)သန်းအထိ ပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့ရတယ်။ ကြားထဲက ဒေ့ါမွန်အသင်း ပေါင်(၈၁)သန်းအမြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ့ဘာ Pogba (ဂျူဗင်တပ်စ် မှ မန်ယူ – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၈၉သန်း)
ပေါ့ဘာရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ မန်ယူ တော်တော်နစ်နာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ကလပ် Le Havre အသင်းကနေ ပေါ့ဘာကို ခေါ်ခဲ့တုန်းက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့် မန်ယူအသင်း ပြဿနာတွေရှင်းခဲ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပေါ့ဘာက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ အလွတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ မှာတော့ မန်ယူက ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၈၉)သန်းအထိပေးပြီးမှ ပြန်လည် ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် အရည်အသွေးမြင့် လူငယ်တစ်ဦးကို လွယ်လွယ်နဲ့လက်လွှတ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ကို ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကော်တင်ဟို Coutinho (လီဗာပူးလ် မှ ဘာစီလိုနာ – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၁၃၆.၅ သန်း)
ကော်တင်ဟိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ လီဗာပူးလ်အတွက်ရော ဘာစီလိုနာအတွက်ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်တင်ဟိုကို ရောင်းချခဲ့လို့ လီဗာပူးလ်အသင်း အမြတ်ရခဲ့သလို၊ ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း ကွင်းလယ်အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ ကစားသမားကောင်းတစ်ဦးကို ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဆုဖလားတွေ ကိုင်မြှောက်ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့ ကော်တင်ဟိုအတွက်လည်း သူ့ ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီလို့ ဆိုရမယ်။
နေမာ Neymar (ဘာစီလိုနာ မှ PSG – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၁၄၉ သန်း)
PSG ကို နေမာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာက တကယ့်ကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပါ။ နေမာက မက်ဆီရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်ကနေ ထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အတွက် PSG ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ သူလိုချင်တဲ့အနေအထားအထိ မရောက်သေးပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအသင်း ငွေကြးအမြတ်အစွန်းရခဲ့ပေမယ့် နေမာနေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ခက်ခဲနေဆဲပါပဲ။
ဘာပေ Mbappe (မိုနာကို မှ PSG – အမြတ်ငွေ ပေါင် ၁၆၆ သန်း)
ဘာပေလို ကစားသမားမျိုးကို PSG လက်ဦးမှုယူပြီး ခေါ်ယူခဲ့တာ အရမ်းမှန်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဘာပေရဲ့ တန်ဖိုးက သူတို့ ပေးခဲ့ရတဲ့တန်ဖိုးထက် ပိုများနေပြီ။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ကစားသမားတွေကို ရောင်းချပြီး ငွေကြေးအမြတ်ရှာဖွေနေတဲ့ မိုနာကိုအသင်းအတွက်တော့ ဘာပေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြောင့် ငွေထုပ်ပိုက်သွားခဲ့တယ်။
ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ. ..ဒါတွေကတော့ Daily Mail သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အသင်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေခဲ့တဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ သိပါရစေလား . . .
Photo:The Independent,Football Beats,YouTube,Quartz
အသငျးအတှကျ ငှကွေေးအကြိုးအမွတျအမြားကွီးရရှိစခေဲ့တဲ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှမြေ့ား
ဘောလုံးအသငျးတဈသငျးအတှကျ ကစားသမားတဈဦးကို ချေါယူတာဟာ အလောငျးအစားဆနျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီကစားသမားရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ၊ နာမညျကြျောကွားမှုအပျေါ မူတညျပွီး သူ့အတှကျ ပေးခရြေတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကလညျး အနညျးနဲ့အမြားကှာဟခကျြရှိလို့ပါပဲ။ တခြို့အသငျးတှကေတော့ လူငယျကစားသမားတှကေို ဈေးပေါပေါနဲ့ချေါ ၊ အသငျးမှာ နရောပေး၊ နာမညျကွီးလာပွီဆိုမှ ကွိုကျဈေးနဲ့ ရောငျးခလြရှေိ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ဆယျစုနှဈအတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျ နာမညျကွီး အာဆငျနယျအသငျး လုပျခဲ့သလိုပေါ့။ တခြို့ကလပျတှကေလညျး နာမညျမကွီးပမေယျ့ ခွစှေမျးခွစေရှိတဲ့ ကစားသမားတှကေို ချေါယူပွီး ထငျရှားလာတော့မှ တခွားအသငျးတှကေို မွငျ့မားတဲ့ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ရောငျးခခြဲ့ကွတယျ။ အခုရကျပိုငျးအတှငျး အဲဗာတနျအသငျးက ဝကျဖို့ဒျအသငျးရဲ့ ဘရာဇီးလျလူငယျတိုကျစဈကစားသမား ရဈခြာလီဆနျ Richarlison (၂၁နှဈ)ကို ပေါငျသနျး(၅၀)နဲ့ ချေါယူဖို့ နီးစပျနပွေီဆိုတဲ့ သတငျးတှထှေကျနတေယျ။ တကယျလို့ ဒီအပွောငျးအရှသေ့ာ တကယျဖွဈလာမယျဆိုရငျ ဝကျဖို့ဒျအသငျး ငှထေုပျပိုကျမယျ့ ကိနျးပါပဲ။ ဝကျဖို့ဒျအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ၊ နှရောသီတုနျးက ရဈခြာလီဆနျကို ပေါငျ(၁၁.၅)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့တာဖွဈပွီး (၁)နှဈအတှငျးမှာပဲ ပေါငျသနျး(၄၀)နီးပါးအထိ အမွတျရမယျ့အနအေထားပါ။
ဘောလုံးလောကမှာ ဈေးပေါပါနဲ့ဝယျ၊ ကွေးမွငျ့မွငျ့နဲ့ ပွနျရောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေ အမြားကွီးရှိခဲ့သလို နောကျထပျလညျးရှိနဦေးမှာပဲ။ အဲဒီထဲကမှ အသငျးအတှကျ ငှကွေေးအကြိုးအမွတျအမြားကွီးရရှိစခေဲ့တဲ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှတှေ့ကေို ဗွိတိနျထုတျ Daily Mail သတငျးစာက အခုလို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ . .
လာပေါ့တျ Laporte (ဘီလျဘာအို မှ မနျစီးတီး -အမွတျငှေ ပေါငျ ၅၇.၂သနျး)
အသကျ(၁၆)နှဈအရှယျမှာ ဘီလျဘာအိုလူငယျအသငျးကို စတငျရောကျရှိခဲ့တဲ့ လာပေ့ါတျကို ပွီးခဲ့တဲ့ဇနျနဝါရီလအတှငျးက မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပေါငျ (၅၇.၂)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့တယျ။ ဘီလျဘာအိုအတှကျ ငှသေုံးစှဲမှုမရှိဘဲ ပေါငျ(၅၇.၂)သနျးကို သပိတျဝငျ အိတျဝငျရခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။ ကစားသမားတှေ ရောငျးခတြာကနေ ငှကွေေးအမွတျအစှနျး အမြားကွီးရှာဖှနေိုငျခဲ့တဲ့ ဘီလျဘာအိုအသငျးရဲ့ Profitable Transfers ထဲမှာ လာပေါ့တျရဲ့အပွောငျးအရှလေ့ညျး ပါဝငျခဲ့တယျ။
အယျလဈဆနျ Alisson (ရိုးမား မှ လီဗာပူးလျ – အမွတျငှေ ပေါငျ၅၇.၉သနျး)
၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက ရိုးမားအသငျး ဘရာဇီးလျလကျရှေးစငျဂိုးသမား အယျလဈဆနျ Alisson ကို အငျတာနစေီယှနျနယျအသငျးကနေ ချေါယူခဲ့တုနျးက ပေါငျ(၇.၁)သနျးသာ ပေးခဲ့ရတယျ။ (၂)နှဈအကွာမှာတော့ အယျလဈဆနျကို လီဗာပူးလျအသငျးဆီ ဂိုးသမားတဈဦးအတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွဈတဲ့ ပေါငျ(၆၅)သနျးနဲ့ ရောငျးခခြဲ့တာကွောငျ့ ရိုးမားအသငျး ပေါငျ(၅၇.၉)သနျးအထိ အမွတျငှရေခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
မာရကျဇျ Mahrez (လကျစတာ မှ မနျစီးတီး – အမွတျငှေ ပေါငျ ၅၉.၆သနျး)
လကျစတာအတှကျတော့ မာရကျဇျ Mahrez ကို ရောငျးခခြဲ့တာက နှဈသီးစားလို့တောငျ ဆိုရမယျ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ပွငျသဈကလပျ Le Havre အသငျးကနေ မာရကျဇျကို ပေါငျ(၄)သိနျးနဲ့ ချေါတယျ၊ မာရကျဇျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေို ကောငျးကောငျးအသုံးခခြဲ့ပွီး ၂၀၁၅-၁၆ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အခုလညျး ပေါငျ(၄)သိနျးတနျ မာရကျဇျကို မနျစီးတီးအသငျးဆီ ပေါငျသနျး(၆၀)နဲ့ရောငျးခခြဲ့တာကွောငျ့ လကျစတာအသငျးဟာ အမွတျငှေ ပေါငျ(၅၉.၆)သနျးအထိ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo (မနျယူ မှ ရီးယဲလျ – အမွတျငှေ ပေါငျ၆၇.၈သနျး)
စီရျောနယျလျဒိုကို ခွစှေမျးအကောငျးဆုံးအခြိနျမှာ ရီးယဲလျအသငျးဆီ လကျလှတျခဲ့တဲ့ မနျယူ အမွတျရခဲ့ပမေယျ့ သခြောပွနျစဉျးစားရငျ ရှုံးပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ကှငျးတှငျးစှမျးဆောငျရညျ၊ ကှငျးပွငျပ အောငျမွငျမှုနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ မနျယူရခဲ့တဲ့ အမွတျငှေ ပေါငျ(၆၇.၈)သနျးဆိုတာက ဘာမှ ပွောပလောကျတဲ့ ပမာဏမဟုတျတော့ဘူး။ ၂၀၀၃ ခုနှဈက စပို့တငျးလစ်စဘှနျးအသငျးကနေ ပေါငျ(၁၂.၂) သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့ပွီး ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ အဲဒီတုနျးက ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျဖွဈတဲ့ ပေါငျသနျး(၈၀)နဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့တာပါ။
ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale (စပါးမှ ရီးယဲလျ – အမွတျငှေ ပေါငျ ၇၅ သနျး)
ဆောကျသမျတနျအသငျးမှာ စတငျတောကျပလာတဲ့ ဂါရတျဘေးလျအတှကျ စပါးအသငျး သုံးစှဲခဲ့တဲ့ ငှကေ ပေါငျ(၁၀)သနျးပါ။ ရီးယဲလျအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ပေါငျ(၈၅)သနျးအထိရခဲ့တာကွောငျ့ အမွတျအစှနျးအမြားကွီးရရှိခဲ့တယျ။
အူစမနျဒမျဘီလီ Ousmane Dembele (ဒေ့ါမှနျ မှ ဘာစီလိုနာ – အမွတျငှေ ပေါငျ ၈၁သနျး)
လကျရှိ လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမားတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူ အူစမနျဒမျဘီလီဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈက ရနျးဈအသငျးကနေ ဒေ့ါမှနျအသငျးကို ရောကျရှိခဲ့တယျ။ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီအစမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈတဲ့ နမော Neymar ကို PSG အသငျးက ချေါယူသှားတာကွောငျ့ သူ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့အတှကျ အူစမနျဒမျဘီလီကို ပေါငျ(၉၇)သနျးအထိ ပေးပွီး ချေါယူခဲ့ရတယျ။ ကွားထဲက ဒေ့ါမှနျအသငျး ပေါငျ(၈၁)သနျးအမွတျထှကျခဲ့ပါတယျ။
ပေါ့ဘာ Pogba (ဂြူဗငျတပျဈ မှ မနျယူ – အမွတျငှေ ပေါငျ ၈၉သနျး)
ပေါ့ဘာရဲ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ မနျယူ တျောတျောနဈနာခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ပွငျသဈကလပျ Le Havre အသငျးကနေ ပေါ့ဘာကို ချေါခဲ့တုနျးက စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ခြိုးဖောကျခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲခကျြတှကွေောငျ့ မနျယူအသငျး ပွဿနာတှရှေငျးခဲ့ရသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ သိပျမကွာပါဘူး ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ ပေါ့ဘာက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ အလှတျနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး ၂၀၁၆ မှာတော့ မနျယူက ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၈၉)သနျးအထိပေးပွီးမှ ပွနျလညျ ချေါယူခဲ့တာကွောငျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ လူငယျတဈဦးကို လှယျလှယျနဲ့လကျလှတျလိုကျတဲ့အကြိုးဆကျကို ခံစားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ကျောတငျဟို Coutinho (လီဗာပူးလျ မှ ဘာစီလိုနာ – အမွတျငှေ ပေါငျ ၁၃၆.၅ သနျး)
ကျောတငျဟိုရဲ့အပွောငျးအရှကေ့တော့ လီဗာပူးလျအတှကျရော ဘာစီလိုနာအတှကျပါ နှဈဦးနှဈဖကျအကြိုးရှိစတေယျလို့ ပွောရမှာဖွဈပါတယျ။ ကျောတငျဟိုကို ရောငျးခခြဲ့လို့ လီဗာပူးလျအသငျး အမွတျရခဲ့သလို၊ ဘာစီလိုနာအသငျးကလညျး ကှငျးလယျအတှကျ တကယျလိုအပျတဲ့ ကစားသမားကောငျးတဈဦးကို ရရှိခဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆုဖလားတှေ ကိုငျမွှောကျဖို့ ဆန်ဒရှိခဲ့တဲ့ ကျောတငျဟိုအတှကျလညျး သူ့ ဆန်ဒတှပွေညျ့ပွီလို့ ဆိုရမယျ။
နမော Neymar (ဘာစီလိုနာ မှ PSG – အမွတျငှေ ပေါငျ ၁၄၉ သနျး)
PSG ကို နမော ပွောငျးရှခေဲ့တာက တကယျ့ကို မမြှျောလငျ့ထားတဲ့အပွောငျးအရှပေ့ါ။ နမောက မကျဆီရဲ့ လောငျးရိပျအောကျကနေ ထှကျဖို့ဆန်ဒရှိနတေဲ့အတှကျ PSG ကို ရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ သူလိုခငျြတဲ့အနအေထားအထိ မရောကျသေးပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအသငျး ငှကွေးအမွတျအစှနျးရခဲ့ပမေယျ့ နမောနရောကို အစားထိုးဖို့အတှကျ ခကျခဲနဆေဲပါပဲ။
ဘာပေ Mbappe (မိုနာကို မှ PSG – အမွတျငှေ ပေါငျ ၁၆၆ သနျး)
ဘာပလေို ကစားသမားမြိုးကို PSG လကျဦးမှုယူပွီး ချေါယူခဲ့တာ အရမျးမှနျပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ဘာပရေဲ့ တနျဖိုးက သူတို့ ပေးခဲ့ရတဲ့တနျဖိုးထကျ ပိုမြားနပွေီ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော ကစားသမားတှကေို ရောငျးခပြွီး ငှကွေေးအမွတျရှာဖှနေတေဲ့ မိုနာကိုအသငျးအတှကျတော့ ဘာပရေဲ့အပွောငျးအရှကွေ့ောငျ့ ငှထေုပျပိုကျသှားခဲ့တယျ။
ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ. ..ဒါတှကေတော့ Daily Mail သတငျးစာက ဖျောပွခဲ့တဲ့ အသငျးအတှကျ အကြိုးအမွတျရရှိစခေဲ့တဲ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှတှေ့ပေဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ အမွငျကရော ဘယျလိုရှိမလဲဆိုတာ သိပါရစလေား . . .